မူလနရော » Miyazaki
Updated: 2016-08-16 13:56
တာကချိဟိုး မြင်း ကွင်း
မြင်း စီး တာ တို့ နွားပေါက် လေး တွေ နဲ့ ကစား တာ တို့ ၊ ပတ် ၀န်း ကျင် လေ့ လာ ရေး နောက်နို့ညှစ် တဲ့ အတွေ့ အကြုံ တို့ ရရှိ နိုင် တဲ့ မြင်း ကွင်း တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။ အတွင်း မှာ ဆို ရင် နို့ ထ...
Updated: 2016-06-14 13:39
တာက ချိဟိုး နတ်ဘုရားကျောင်း ( ဂျင်းဂျာ )
တာကချိဟိုး လို့ ခေါ် တဲ့ နတ်ဘုရားကျောင်း မှာ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ခုသောကျောင်း တော် က တစ်ပေါင်း တည်း တည်ရှိ ရှိ နေပြီး ၊ လွန် ခဲ့ တဲ့ နှစ် ပေါင်း ၁၉၀၀ ၀န်းကျင်း လောက် က ဧကရာဇ် ဆူအိနင်း က ဆောက် လုပ် တ...
Updated: 2016-06-09 09:44
နိချိ နန်း ကမ်း ရိုး တမ်း မှာ ကားလေး မောင်း ရင် အပမ်း ဖြေ လို့ ရတဲ့ နေ ရာ ။ လေး ရာ သီ ပတ် လုံး ရာ သီ လိုက် ပန်း ပေါင်း စုံ ဝေ ဆာ နေပြီး နန်းကို ခု ( တောင် ပိုင်း ) ရဲ့ အလှကို ဖေါ် ဆောင် နေ ပါ...